लक्सोराइडमा कन्भर्टेवल नोट किन्दा १ हजार डलरको लगानी लाखौं बन्नसक्छ : जयस श्रेष्ठ, सीईओ « Khasokhas
लक्सोराइडमा कन्भर्टेवल नोट किन्दा १ हजार डलरको लगानी लाखौं बन्नसक्छ : जयस श्रेष्ठ, सीईओ
नेपालीको लगानीमा अमेरिकामा संचालित लक्सोराइडले कन्भर्टेवल नोटको योजना अगाडि ल्याएको छ । जस अन्तरगत चालक र निकटवर्तीहरुले एकहजार डलरदेखि २० हजार डलरसम्मको लगानीको अवशर पाउनेछन् । १८ महिनासम्म ५ प्रतिशत ब्याज र त्यसपछि शेयरमा रुपान्तरण हुने यो कन्भर्टेवल नोटका अन्य धेरै फाइदाहरु रहेका छन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर लक्सोका संस्थापक तथा सीईओ जयस श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।
लक्सोराइडले ड्राइभरलाई दिने भनेको इन्सेन्टिभ कस्तो खालको हो ?
यो कन्भर्टेवल नोट अन्तरगत चालकहरुले आफूले लगानी गरेको रकममा १८ महिनासम्म ५ प्रतिशत ब्याज पाउनेछन् । १८ महिनापछि उनीहरुलाई आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने अप्सन पनि छ । वा त्यसलाई शेयर वा लगानीमा रुपान्तरण गर्न सक्नेछन् । पैसा पनि फिर्ता नलिने र शेयर पनि नलिनेहरुले १८ महिनापछि ७ प्रतिशतका दरले ब्याज पाउनेछन् । यो कन्भर्टेवल नोट किन्नेहरु लक्सो क्लबको सदस्य बन्नेछन् र उनीहरुले हरेक राइडमा १० प्रतिशत छुट समेत पाउनेछन् । कन्भर्टेवल नोट किन्न रुची भएकाहरुले [email protected] मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।
यो लगानीको सुविधा चालकलेमात्र पाउने हुन् ?
लक्सोको अहिलेको सुविधा निकटवर्ती र चालकहरुलाई मात्र हुनेछ । यसमा पहिलो प्राथमिकता नेपाली मुलका व्यक्तिलाई नै दिइन्छ । तर कालान्तरमा निकटवर्ती अरु व्यक्तिले पनि यो सुविधा पाउन सक्नेछन् ।
यो योजनामा नेपाली चालकहरुको कत्तिको आकर्षण पाउनुभयो?
चालकहरुको निकै आकर्षण बढेको छ । कतिले त यो अवशर लिईसक्नु भएको छ । कतिपय व्यक्ति लिने प्रकृयामा हुनुहुन्छ । यसबाट चालकहरुलाई अमेरिकी कम्पनीको स्वामित्व लिने अवशर हुनेछ । लक्सोले आफ्नो सुविधा बढाउदै लैजाने क्षमताको समेत विकाश गर्नेछ । आईपीओमा जाँदासम्म एकहजार डलरको लगानी लाखौं डलरमा पनि बदलिन सक्छ । अहिले न्यूनतम १ हजार डलर र अधिकतम २० हजार डलर लगानी गर्ने अवशर रहेको छ । कानुन व्यवसायीको टिमले कागजात तयार गरेको छ । अमेरिकाको सबै राज्यबाट लगानी गर्न सकिनेछ । पछि हामी विश्वब्यापी रुपमा पनि जाँदै छौं । क्रेडिट कार्ड, नियमित चेक वा बैंक डिपोजिटमार्फत लगानी गर्न सकिन्छ ।
यात्रु र चालकलाई लक्सो प्रयोग गर्दा र अरु एप्लिकेशनमार्फत यात्रा गर्दा के फरक हुन्छ ?
यात्रुहरुलाई सरचार्ज लगाइदैन । अरु एप्लिकेशनमा व्यस्त समयमा भाडादार बढ्ने हुन्छ । तर लक्सोको भाडादर सधै नियमित हुन्छ । लक्सोको प्रति कारोबार चालकलाई ८५ प्रतिशत रकम जान्छ । यात्रुहरुलाई पनि विभिन्न शुल्क वा चार्जका नाममा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्दैन । लक्सोले ड्राइभरलाई बढी पैसा दिने भएकाले उनीहरुले कम काम गरेपनि पुग्ने हुन्छ । यात्रुहरुले राइड शेयर गर्ने झन्झट पनि लक्सोमा हुँदैन ।
लक्सोमा गरेको लगानी नडूब्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्नुहुन्छ ?
यसको जिम्मा कम्पनीले लिन्छ । राइड शेयर उद्योग प्रविधिको क्षेत्रमा असाध्यै छिटो विकाश भइरहेको क्षेत्र हो । त्यसैले हामी आशावादी हुनुपर्छ । त्यसैले माथिजाने भन्दा तल जाने चान्स छैन । तर घाटामा गएमा कम्पनीको सम्पत्ति बेचेर त्यसको असुलउपर गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपाललाई विशेष लक्षित गरि नेपाली विशेषता सहित निर्माण गरिएको सगुन लाइट सञ्चालनमा
नेपालीहरूले निर्माण गरेको सगुनले नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई विशेष लक्षित गरेर आफ्नो परिचय नखुलाई प्रयोग गर्न मिल्ने
म अमेरिकी नागरिक होइन, के मैले १२ सय डलरको चेक पाउँछु ?